Su’aalo Ay Qasab Tahay Inuu Arday Kasta Isweeydiiyo Si Uu U Guuleysto | shumis.net
Home » galmada » Su’aalo Ay Qasab Tahay Inuu Arday Kasta Isweeydiiyo Si Uu U Guuleysto
Su’aalo Ay Qasab Tahay Inuu Arday Kasta Isweeydiiyo Si Uu U Guuleysto
Waxaan doonayaa in qormadaan aan ka soo qaado, su’aalo dhowr ah oo badanaaba ay is weydiiyaan ardayda waxbarasho doonka ah, ama ay qasab thay in ay is weydiiyaan.
Waa su’aalo la xiriira mustaqbalkaaga iyo noloshaada ardaynimo ka dib.
Haddii aad is weydiinaysid, maadada aad baranayso, meesha aad ka baran doonto iyo qaabka aad u baran doonto iyo hamiga aad leedahay ee mustaqbalka ah, qormadaan waxay fikrad kaa siin doontaa sida ugu haboon ee su’aalahaaga jawaab ugu heli kartid.
Badanaa ardaydeena way ku yar tahay tirada is weydiiso su’aalahaan ama ay helaan dad kala taliya, sababahane way kala duwan yihiin, aqoon darri ha iska jirto ama awood la’aan wax doorasho intaba.
Dhibaatooyinkaas iyo wax la mid ah, si looga hortago waa in Su’aalahaan hoos ku xusan qof kasta oo arday ah is weydiiyaa.
Su’aalahaas waa in aad u raadisaa jawaabo ku qancin kara inta aadan waxbarasho galin.
Waa in aad ra’yigaaga aad wax ku dhistaa oo talo qof kale aysan ku wareerin, waxaa laga yaabaa in qofka aad la tashanayso uu kugula taliyo waxa uu jecelyahay isaga.
Arday badan waxay jaamcadaha uga hareen, ra’yigooda kuma soo galin jaamcadda oo waalid ayaa ku qasbay ama qof qaraabo ah oo qarashka jaamcadda bixiya, isagoo uusan ka fakarin.
Su’aasha hore, waa midda ugu muhiimsan, jawaabteedane adigaa lagaa doonaayaa, sababtoo ah, waxa aad baranayso qof kuu sheegi karo malahan, maxaayeelay qofka shakhsiyadiisa, iyo hamigiisa iyo qaabka uu jecelyahay inuu u shaqeesto iyo waxyaabo kale ayay ku xiran tahay.
Su’aasha labaad iyadane waa muhiim in qofka uu ka fiirsado oo ah sababta uu u baranayo maadadaan, wayna kala duwanaan karaan.
Su’aasha sadaxaad oo ah, halkee wax ka bartaa, jaamcaddee ama wadankee? tani waa su’aasha badana ardayda ay is weydiiyaan iyagoo aanan ka soo jawaabin labada su’aal ee ka horreysa, taasina qalad ayay u horseeddaa ardayda iyo jahwareer, waxbarashada aad baranayso waa in jaamcadda aad ka baranayso ay magac ku leedahay oo waxbarashadeeda tayo leedahay oo shahaadadeedane ay aqoonsi leedahay oo horay wax ugu sii baran kartid, qasab maahan in jaamacad gooni ah laguu tilmaamo oo ay dhici karto in ay kaa fogtahay ama aadan awoodin.
Qofka dadaalkiisa iyo aqoontiisa iyo firfircoonidiisa ayaa meel gaarsiiso, shahaado ka sokow, maxaa yeelay meeqaa isku jaamcad ka soo baxday qofna magac ku yeeshay oo aqoontiisa laga faaideystay meeqaane ka muuqan waxbarashadii aad isla soo barateen, sidaa darteed adiga ayay kuu laabanaysaa jawaabta su’aashaan.
Hadii intaas aad ka jawaabtid, waa in aad is weydiisaa su’aasha ugu dambayso oo ah, shahaadadaan aan soo qaadanayo, maxaan ku samayn doonaa, maxaan mustaqbalka ii qorsheysan oo aan hiigsadaa oo aan fiirsadaa maalin kasta si aan u gaaro, qof ayaa magac inuu ku gaaro u qaata, qof ayaa qof kale u yahay tilmaan inuu isaga oo kale noqdo, qof ayaa inuu meel gooni ah shaqo uga helo wax u barto, mathalan tusaale ahaan qof ayaa jeclaan jiray inuu dago wadan gooni ah oo uu ka shaqaysto sababa isaga u khaas ah dartiis, qofkii jaaamcadda uu ka soo baxay si uu ugu shaqeeyo wadankaas, waa inuu horta hubiyo wadankaas shahaadadaan malaga aqoonsan yahay, hadii ay shuruudo kale la xiriiraan shahaadadaas, maxay yihiin oo aan xoogga saaraa, taasi waxay tahay macnaheeda waa in mustaqbalkaaga aad adiga qorshaysataa.
Waxaan ku soo gabagabaynayaa qormadaan talo uu macallimiinteyda mid ka mid ah uu dhihi jiray oo ah: “Noqo qof leh qorsho, haddii kale qolaa qorsho kuu dajisanaysa“.
Abdullahi M. Mahdi
Title: Su’aalo Ay Qasab Tahay Inuu Arday Kasta Isweeydiiyo Si Uu U Guuleysto
Posted by galmada Net, Published at March 06, 2016 and have 0 comments
Sep 22, 2005 By:W:Q:C/laahi Xasan Maxamuud (khaliil) Qaybtii 1-aad Mujtamaca Soomaalida oo Bariga Afrika ku noolaa muddo badan wuxuu soo ...